Herinandro goavana tao Bahrain · Global Voices teny Malagasy
Herinandro goavana tao Bahrain
Voadika ny 22 Mey 2019 3:51 GMT
Bahrain, firenena kely velarana, niaina fahafahana ara-politika vao haingana hatramin'ny marsa 1999, rehefa nandray ny fitondrana ny mpanjaka vaovao, Shaikh Hamad bin Isa Al-Khalifa ary namafa toerana mba hipetrahan'ny fahalalahana ara-pôlitika goavana, saika ny olom-pirenena Bahrainita sy ny mponina rehetra no lasa manam-pahaizana ara-politika! Nampitombo ny bilaogy ho 60 mahery izany, izay maro amin'izy ireo no mavitrika ary saika ny ankamaroan'izy ireo no miresaka politika eo an-toerana manokana sy ny politika iraisam-pirenena amin'ny ankapobeny, vitsy amin'izy ireo no azo sokajiana ho toy ny diary manokana, na dia marobe aza izy ireo no azo jerena, rehefa miampy ireo bilaogin'ny mpianatra an-jatony avy amin'ny Oniversiten'i Bahrain ary koa ny fiarahamonin'ny tanora avy amin'ny Sekoly Bahrain izay ao anatin'ny Departemanta Amerikana ho Fiarovana ny Fanabeazana, tsy miresaka ireo zanaky ny mpiasan'ny Tatsambo Amerikana avy amin'ny andiany faha-5 an'ny US Navy manana ny foibeny ao Bahrain, fa ho an'ny Bahrainita marobe ihany koa.
Mbola mitohy ny fiparasaky ny tontolon'ny bilaogy Bahrainita ary mampahafantatra antsika hatrany ireo bilaogy vaovao ny BahrainBlogs.org amin'ny alalan'ny fampidirana lisitra sy fanangonana azy ireo izay mihavao ho azy isan'ora.
Nisy ny fihetseham-po goavana tao Bahrain tamin'ity herinandro ity satria nampiseho indray ny tsy firaiketany amin'ity taonjato ity ny parlemanta araka ny voalazan'i Mahmood tao amin'ny Mahmood's Den, nilaza izy satria toa tsy azo dikaina izany, dia tsara indrindra ny miditra amin'izy ireo ary manomboka mivarotra hazo ho an'ny polisy ara-pivavahana ho avy (mutawwas) mba hampiasana hitarihana “amim-panajana” ny mpino amin'ny vavaka sy toriteny an-tery isaky ny Zoma. Na dia mbola tsy lasa lalàna aza ny fanirian'ny parlemanta, dia nahazo fanoherana mahery vaika avy amin'ny fiarahamonina sivily toy ny Bahrain Chamber of Commerce & Industry ary koa avy amin'ireo mpanao gazety matanjaka (arabo) izany. Ao anatin'izany rehetra izany, bilaogera Bahrainita vaovao: Jaffar manontany ny filàna ny antso “Athan” ho an'ny fivavahana silamo amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo.
Manama Republic, bilaogy ara-politika mpaneso avy amin'ny mpanoratra tsy fantatra anarana manohy manaparitaka ireo antony miafina ataon'ny tafaorina eo amin'ny fahefana; ny lohaheviny farany dia mandinika ny zavatra tsapany fa fihetsika misolelaka ataon'ny tontolon'ny fandraharahana eo an-toerana amin'ny fametrahana fikambanana mpanao asa soa izay hampifandraisana amin'ny fanampiana atao tsy mitonona anarana hatramin'izao amin'ity fandraharahana vaovao mpanao asa soa sy fikambanana ara-tsosialy ity. Manohy manazava ny fifandraisana misy eo amin'ireo karazana fiarahamonina Bahrainita sy ny fitondrana izy ary manazava fa arakaraka ny maha-lavitry ny “latabatra” afovoany amin'ny fianakaviana Bahrainita na ny tsirairay no maha-sarotra kokoa ny fiainan'izy ireo.
Nisy ihany koa ny hetsika hafa mampalahelo tao amin'ny nosy, indrindra ireo fahafatesana isan-karazany noho ny lozam-pifamoivoizana izay asongadin'i eMoodz sy The Joker fa azo sorohana. The Joker manokana manana hevitra vaovao mikasika ny fomba hampihenana bebe kokoa ny lozam-pifamoivoizana, raha mitantara an-tsary ny zava-niainany nanakaiky dia akaiky ny fahafatesana, na teo amin'ny fianakaviana na teny an-dalana i eMoodz. Mino aho fa miankina amin'ny Sampan-draharahan'ny Fifamoivoizana ny vahaolana izay tokony hampihatra fitsipika sy lalàna manan-danja ary manasazy ireo mpamily fiara mandeha any amin'ny tsy faleha, fa tsy manohy ho fitaovana misava lalana fotsiny ho an'ny mpanjaka sy ny olo-manan-kaja.
Manohy ny lohahevitra momba ny fifamoivoizana, mbola sosotra ihany i LiB Team ary tezitra tamin'ny fiantsonana fiara tsy am-piheverana, manome porofo an-tsary marim-pototra sy mamarana amin'ny loza mitatao amin'ny famoronana “lava-drivotra aerodynamika vaovao” amin'ny fiara mandika lalàna raha tsy mihaino ny torohevitra tena sarobidy ireo tompony.
Ali Al-Saeed, Bahrainita mpanoratra tantara amin'ny teny Anglisy voalohany, sy tokana hatramin'ny vao haingana, milaza amintsika fa nanomboka tamin'ny 21 desambra ny Fihaonana Faharoa momba ny Literatiora ho an'ny Tanora Arabo izay mety handraisany anjara amin'ny famakiana ny tantara nosoratany sy tantara fohy ao amin'ny Fikambanan'ny Mpanoratra ao Bahrain sy ny Al-Rewaq Art Gallery. Bahraini Rants indray manohy mampianatra ny mpamakiny amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanatsarany ny rakiteny (voambolana) isan-kerinandro amin'ny famoahana teny vaovao telo izay tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny resadresaka mahazatra. Bilaogera Bahrainita vaovao, Cancer, kosa mitaraina ny tsy fisian'ireo manam-pahaizana Bahrainita maro ao amin'ny aterineto, izay hitany sy ny hafa ho mahakivy.
Ba7raniah* (arabo) kosa etsy ankilany maneho ny fomba hialana any an-tsekoly na ny asa amin'ny alalan'ny fanampiana ny andro tsy fiasana ofisialy amin'ny andro tsy hiasana noho ny aretina, ary koa roa andro hafa fanonerana ho an'ny andro tsy fiasana tafalatsaka ao anatin'ny faran'ny herinandro!
* Mampiasa ny isa 7 Anglisy ny Arabo ho solon'ny feo mafy “H”, noho izany tokony hovakiana ho “Bahraniah” io teny manokana io, manana sakelika ara-poko ihany koa ny teny satria mandray ny tenany ho Bahranis ny vahoaka Bahrainita izay ao amin'ny sekta Shiita an'ny Silamo, raha miantso ny tenan'izy ireo ho Bahrainita kosa ireo izay manaraka ny Sonita an'ny Silamo – fahasamihafana kely amin'ny fanononana, saingy maneho rehareha sy fahasamihafana ara-poko